Arday dhameystirtay waxbarasho jaamacadeed oo xaflad Qalin-jabin ah loogu sameeyay Harar Harar. - Cakaara News
Arday dhameystirtay waxbarasho jaamacadeed oo xaflad Qalin-jabin ah loogu sameeyay Harar Harar.
Harar(CakaaraNews) Axad july 28,2013:- Xaflad weyn oo ay ku qalin-jabinayeen Ardey ka kala socday deegaanada Soomaalida iyo Hararida iyo ismaamulka Diridhabe oo dhameystay wax-barashadii jaamacada Civil-Service College iyo Alamaya University ee ku Taala harar ayaa lagu qabtay magaalada Harar Xafladaha qalinjabinta oo sanad waliba loo qabto ardayda ka Qalin- jabisay Jaamacada Alamaya,ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ama ka sooq aybgalay arday,macallimiinta,waaliddiinta ardayda iyo madax sare oo ka socday Jaamacada Civil-Service College,Alamaya iyo Kuwa Dalka iyo Deegaanada.
Ardeydan Qalinjabisay oo ka kala socday deegaanada DFI sida Soomaalida,Hararida iyo ismaamulka Dirdhabe ee qalin-jabiyay ayaa tiradoodu badneed oo ka baxeen Civil Service University jamacadaha iyo kala duwan sida caafimadka, Injineerinka, farshaxanka iyo sayniska Public Management waxayna heerkoodu ahaa Mastar Degree iyo oo iyaguna qaatay darajada koowaad ee degree Programme.
Dadkii ka qaybgalay xafladda oo hadallo jeediyay ayaa ardayda dhameystay waxbarashadooda kula dardaarmay inay aqoontooda uga faa’iideyaan guud ahaan Dalka Ethiopia iyo Deegaanka ay ka soo jeedaan oo ay ugu horreeyaan waalidiintood oo heerkan soo gaarsiiyay.
Prof. ka socday jaamacadaha Civil Service University ayaa ardayda qalin-jaibyay si weyn ugu ammaanay dadaal dheeraad ah oo ay muujiyeen iyo inay ahaayeen intii ay waxbarashada wateen kuwo akhlaaq wanaagsan. “Ardayda waa kuwa ugu firfircoon marka loo eego ardayda kale ee waxey kasoo jeeda deegaamada Soomaalida iyo Hararida iyo ismaamulka Dirdhabo Waxaana kula dardaarmayaa in dadaalkooda ay halkaas kasii wadaan,” ayuu yiri Prof. oo ballan-qaaday inay ka jaamacad ahaan garab isgaati doonaan.
ardayda ka kala socdeen deegaamada Soomaalida iyo Hararida iyo ismaamulka Dirdhabo Maxamed C/Casiis Maxamed C/salan oo ku hadlay magaca ardayda qalin-jabinaysay ayaa tix yar oo gabay ah ku guubaabiyay ardaydii qalinjabinaysay. Isagoo intaas kaddib sheegay in waxbarashadu aysan dhammaad lahayn, looga baahan yahay arday walba oo uu dadaalkiisa laba jibaaro.
Ugu dambeyn, waxaa ardaydii qalin-jabisay la guddoonsiyay shahaadooyinkii ay ku guuleysteen iyo abaalmarino la siyay Ardaydii kaalimaha hore ka gashay waxbarashada, iyadoo xafladdu ay kusoo dhammaantay farxad dheeraad ah oo ay muujiyeen ardaydii qalin-jabisay, waalidiintood iyo asxaabtii kale ee xafladda goobjoogga ka ahayd.